မြဝတီမြို့တွင် (၇၃) နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲနှင့် အားကစားကွင်းသ? - Yangon Media Group
မြဝတီ၊ မတ် ၂၅
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့တွင် လာမည့်မတ် ၂၇ ရက်၌ ကျ ရောက်မည့် (၇၃) နှစ်မြောက် တပ်မ တော်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသောအားဖြင့် မြဝတီမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ကြီးမှူးကျင်း ပသော ချစ်ကြည်ရေးဘောလုံးပြိုင် ပွဲနှင့်အားကစားကွင်းသစ်ဖွင့်လှစ် ခြင်းအခမ်းအနားကို မတ် ၂၄ ရက် ညနေ ၃ နာရီခွဲတွင် မြဝတီမြို့အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် သောင်ရင်းအား ကစားကွင်း၌စည်ကားစွာ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ သောင်းရင်း အားကစားကွင်းသစ်ဖွင့်ပွဲနှင့် (၇၃)နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့အထိမ်းအမှတ် ချစ်ကြည်ရေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲသို့ မြဝတီ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးထူးလွင်မှ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားပေးပြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာ ယာရေးကော်မတီဝင် ဦးစိန်သောင်းက ” ကျွန်တော်တို့ဒီအားကစားကွင်း ဖြစ်ပေါ်လာအောင် မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းရွှေနဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးက မတည်ပြီး ကွင်းပြင်ဆင်စရိတ်ကို ကျပ်သိန်း ၁၅ဝ စိုက်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုဆိုရင်ဒီအားကစားကွင်းကို ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအားက စားကွင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့မြဝတီမြို့မှာ အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကို ကျင်းပနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အားကစားကွင်းများရှိလာရင် လူငယ်တွေလည်း အားကစားကို စိတ်ပါဝင်စားမှု မြင့်မားလာနိုင်တဲ့အတွက် အခြား လောင်းကစားမှုများနဲ့ မူးယစ်ဆေး ဝါးကိစ္စရပ်တွေမှာ စိတ်ပါဝင်စားမှု လျော့နည်းလာနိုင်ပြီး အနာဂတ်ကာလမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ လူမှုပတ်ဝန်း ကျင်ကောင်းကို ဖန်တီးလာနိုင်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဒီအားကစားကွင်းကို ဖောက်လုပ်ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။
ဖွင့်ပွဲနေ့တွင် ချစ်ကြည်ရေး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအဖြစ် မြဝတီသတင်း မီဒီယာအသင်းနှင့် အိုးစတားအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြပြီး အဆိုပါ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို ပတ်လည်စနစ် ဖြင့် မြဝတီသတင်းမီဒီယာအသင်း၊ သင်္ဃန်းညီနောင်အသင်း၊ဌာနဆိုင်ရာအသင်း၊ အိုးစတားအသင်း၊ အိုးစတားညွန့်ပေါင်းအသင်းနှင့် ညီ နောင်ဗျူဟာတပ်မတော်ဘောလုံး အသင်းတို့ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ မြဝတီမြို့ရှိမြို့မအားကစားကွင်းကြီးအား ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးငွေကျပ်သိန်း ၉ဝဝ ဖြင့် အကြီးစားပြင်ဆင်နေသည်မှာ နှစ် နှစ်ခန့်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သော်လည်း ယနေ့ချိန်ထိ အပြီးသတ်မှု မရှိသေး ကြောင်း သိရသည်။
ကျပ်သိန်း တစ်သောင်း အကုန်အကျခံ၍ အကြီးစား ဘက်စုံပြုပြင် မွမ်းမံမည့် ရတနာစေတီ ဆင်များရှင် ဘု?
ရန်ကုန်မြို့လယ်မှ ဟံသာဝတီ လေဆိပ်သို့ နာရီပိုင်းအတွင်း ရောက်စေမည့် လမ်းအပါအဝင် အဓိကလမ်းမကြ
အခွင့်အရေးရချိန်တွင် ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့သော လူကာကူကို ဆိုးလ်ရှား ချီးကျူး